Maro no mandiso io hoe “fampihavanam-pirenena” io fa fampihavanana politika no tokony hatao eto amin’ny firenena. Raha atao indray mijery dia tsy misy Malagasy miady eto fa mifandray tsara ny olona eran’ny lafivalon’ny nosy, fa tsy toy ny any amin’ny tany Afrikanina maro izay samy manana ny teniny ary tsy mifankahazo. Ekena fa nisy fitsaram-bahoaka izay azo sokajiana ho fifamonoana ihany saingy vokatry ny tsy fandraisan’andraikitry ny mpitondra no mahatonga izany fa tsy finiavana hifandranitra sy hifamono. Ny atao hoe manaiky hihavana dia mamela ilay olona tamin’ny hadisoany ary vonona handefitra amin’ny lafiny rehetra toy ny tombontsoa manokana, fahefana... Zava-dehibe ny fifampieken-keloka sy fahavonona hiara-kanarina ny firenena ka hametraka ilay tena hambom-po maneho fitiavan-tanindrazana, ka tsy hanaiky hataon’ny vahiny tohatra sy fangoronan-karena lava eto. Lany teny anivon’ny antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna momba ny fampihavanam-pirenena saingy tsy misy hantenaina aloha hatreto. Toa zary fifanilihana sy mizana tsindrian’ila aza no misy ka ao ny omena vahana ary ao no hanaovana antsojay. Fampihavanana ny mpanao politika no tokony hatao ary mila mifona amin’ny vahoaka noho ny heloka vitany izy ireo aorian’izay, saingy mbola sarotra ny hahatanterahany noho ny tsy fisian’ny tena finiavana fa fikatsahana tombontsoa no betsaka.